Madaxweynaha dalka oo shacabka uga digay siyaasiyiinta ka soo horjeeda BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo shacabka uga digay siyaasiyiinta ka soo horjeeda BBI
Madaxweynaha dalka oo shacabka uga digay siyaasiyiinta ka soo horjeeda BBI
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay in ay taageeraan geeddisocodka sharci beddelka ee BBI isagoo dhanka kale uga digay in aynan marin habaabin siyaasiyiinta qorshahan dhaliilsan.
Waxaa uu xusay in dhaqangelinta arrimaha BBI uu dalka waxyaabo badan ka faa’iidaya isagoo tusaale u soo qaatay in la kordhin doono miisaaniyadda dhaqaale ee ismaamullada.
Mr. Kenyatta ayaa carrabka ku adkeeyay in ay jiraan siyaasiyiin iyagoo aan daacad ahayn ka soo horjeeda sharci beddelka.
Madaxweynaha ayaa arrimahan ka hadlay xilli uu shalay ismaamulka Nyeri kulan kula yeeshay in ka badan 7,000 oo ah siyaasiyiinta gobolka bartamaha dalka.
Waxaa uu halkaas ku joogi doonaa booqasho 4 cisho ah halka uu xusay inuu wadatashi badan sameeyay ka hor inta uunan billaabin u ololeynta BBI.
Mr. Kenyatta ayaa mar kale sheegay in ay ka go’an tahay inuu talada dalka wareejiyo iyadoo ay xasilooni buuxda jirto.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale siyaasiyiinta ku boorriyay in ay soo afjaraan dhallinta ay u adeegsanayaan rabshadaha.
Sidoo kale madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa maanta madaxda siyaasadeed ugu baaqay in ay midnimo muujiyaan.
Waxaa uu sheegay in sida keliya ee lagu xoojin karo midnimada iyo wadajirka shacabka ay tahay in hoggaamiyaasha aynan kala qaybsanaan.
Madaxweynaha ayaa maanta madaxtooyada yar ee Sagana State Lodge ee ismaamulka Nyeri kula kulmaya hoggaamiyaasha dhallinyarada.
Mr.Kenyatta ayaa kulamo kala duwan maalinkii saddexaad la yeelanaya qaybaha bulshada iyo madaxda ismaamullada gobolka bartamaha dalka isagoo indha-indhaynaya sidoo kalena xarigga ka jaraya mashaariic horumarineed.
Previous articleMaamulka Jubbaland oo ka hadlay shirkii uu madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay
Next articleMexico oo ka hadashay meydad laga helay waqooyiga dalkaas